26 Jul, 2019 - 00:07	 2019-07-25T17:34:43+00:00 2019-07-26T00:04:59+00:00 0 Views
MAKADII henyu veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 32 nemwana 1, ndiri pamushonga uye ndotsvagawo murume anoda zvekuroora kwete zvekutamba. Ndinoda ari pamushonga seni asi asingataridze hurwere, anonamata ane tsitsi nerudo rwechokwadi uye anoshanda. Varume vevanhu, matsotsi nevanoda zvekutamba musazvinetse henyu nekufona. Anenge andifarirawo nhamba dzangu dzinoti 0779 008 960.
Makadii? Ndiri murume ane makore 41 nevana 2, ndinotsvaga mudzimai ane mwana 1 akavimbika. Ndiri pamushonga, nhare yangu 0776 936 278.
Makadini veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 39 ndinotsvagawo musikana wekuroora ari pachokwadi. Anondida ngaandibate pa0782 534 135.
Ndiri murume ane makore 36, ndotsvaga mudzimai ane makore 30 zvichikwira ane vana vaviri kana vatatu. Ini ndine vana vatatu. Ari HIV negative anoda zvemba anondibata panhamba idzi 0782 499 748.
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 21. Ndinotsvagawo shamwari yechisikana. Andifarira ngaandibatewo pa0774 327 089.
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 26 ndinoda musikana ave kuda zvemba. Ari pachokwadi ngaandibate pa0775 972 744.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 29 nemwana 1, ndotsvagawo mukadzi anoda zvemba. Zvimwe totaura pa0784 559 143.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri murume ane makore 30 nemwana 1 ndinotsvagawo mudzimai anoda zvemba ane makore 19 kusvika 24 kunyangwe ane mwana. Anondida ngaafone pa0715 028 031.
Makadii? Ndinotsvagawo mukadzi ari pamushonga asi akasimba. Ndine vana 2 uye ndiri muHarare. Nhare yangu 0774 894 069.
Makadii? Ndiri murume ane makore 46, ndotsvagawo mukadzi anoda zvemba ari pamushonga seni. Ngaave akanaka ane makore 39 zvichidzika ane mwana 1 kana asina. Nhare yangu 0771 682 295.
Ndiri mukadzi ane makore 37, ndinodawo murume ane makore anotangira pa40 kusvika pa50. Ndine mwana mwana 1, nhare yangu 0775 357 520.
Ndiri murume ane makore 29, ndinotsvaga musikana wekuroora ane makore 18 – 25 akasimba uye akanaka. Ndinogara muHarare, ndinobatika pa0779 046 769.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 23, ndotsvagawo mudzimai wekuwadzana naye. Ngaandibate pa0777 017 076.
Makadini? Ndiri murume ane makore 38 nemwana 1. Ndinotsvagawo mukadzi akavimbika anoda zveimba, angava ane mwana 1 kana asina. Anondibata pa0786 654 561.
Ndiri musikana ane makore 25, ndinotsvaga mukomana ane makore 29 – 35. Anenge andifarirawo anondibata pa0712 492 169.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri musikana ane makore 19, ndotsvagawo mukomana ane makore 23 kusvika 29. Andida ngaandibate pa0786 705 548 ari pachokwadi.
Makadiiko veTishamwaridzane? Ndinotsvakawo musikana wekudanana naye ane makore 18 kusvika 20. Nhare yangu 0782 812 520.
Makadii zvenyu veKwayedza? Ini ndiri murume ane makore 40 nevana 2. Ndinotsvagawo mudzimai uri pachokwadi wokuroora ane makore 20 kusvika 30, unonamata uye usina kumbonwa doro. Ini handina kumbonwa doro kana kuputa fodya muupenyu hwangu. Andifarira ngaandibate pasina kukundikana pa0712 063 616.
Makadii? Ndodawo mukadzi mutsvuku ari mukobvu ane mwana kana chero asina aine makore 18 – 27. Ari pachokwadi ngaandibate pa0785 537 170.
Ndiri murume ane vana 2, ndinotsvagawo single mother vekufambidzanawo navo. Ndodawo vakasimba vakobvu vari pamushonga. Ndiri muHarare, nhamba dzangu 0774 894 069.
Ndiri murume ane makore 41, ndinotsvagawo mukadzi wekushamwaridzanawo naye. Nhare yangu 0784 925 678.
Makadii paTishamwaridzane? Ndiri musikana ane makore 22, ndinodawo murume ane makore 24 kusvika 30 ane mwana 1 kana asina uyezve asiri pachirongwa ari pachokwadi. Ave kuda kuroora uyezve anoshanda sezvo ndichishandawo ngaandibate panhare yangu 0783 820 719.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 37 nevana 2 ndodawo mudzimai anoda zvemusha ari pachokwadi uye ane makore 20 kusvika 30. Ane mwana 1 kana 2 andidawo ngaandibate pa0779 704 645.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 36 ekuberekwa uye ndinotsvagawo mudzimai anoda zvemusha. Ndine vana vaviri uye handisi pamushonga. Andida ngaandibate pa0777 033 717.
Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 34 nevana 3. Ndiri pamushonga, ndinotsvaga murume ari pamushonga seni anoda zvewanano. Vanoda zvekutamba musafone zvenyu. Nhare yangu 0771 612 500.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 35, ndinotsvagawo mukadzi wekuroora asiri pamushonga. Nhare yangu 0783 585 018.
Kwazivai veKwayedza. Ini ndiri mukomana ane makore 29 ndinotsvagawo shamwari yekupinda muwanano nayo ari pachokwadi ane makore 18 – 29 asina chirwere nekuti ini handina. Vanondibata pa0774 774 516.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 28 ndinotsvagawo musikana wekupinda naye muwanano asina chirwere anotya Mwari. Ari pasi pemakore andinawo anondibata pa0715 275 347.
Ndiri murume ane makore 35, status negative uye ndinodawo mukadzi ari pasi pemakore 28. Anoda zvemba akashambidzika akanaka andifarirawo ngaandibate pa0771 358 472.
Makadini? Ndinotsvagawo musikana wekuroora ari pachokwadi asiri pamushonga. Ndine makore 23 nhare yangu 0773 160 452.
Ndiri kutsvagawo mukadzi wekuroora ane makore 45 – 54 ari negative. Ndakafirwa uye ndine makore 56. Andidawo fona pa0773 484 310.
Makadii? Ini ndiri mukomana ane makore 21 ndinotsvagawo musikana ane makore 18 kusvka 19 wekudanana naye kusvika muwanano. Nhare yangu 0785 187 667.
Ndiri murume ane makore 30, ndinotsvagawo mudzimai ane makore 20 kusvika 25 akanaka uye anoda zvemba. Ndinoshanda mabasa emaoko, akavimbika ngaandibate pa0773 985 333.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri musikana ane makore 19, ndinotsvagawo mukomana anondiroora asi handishande. Andifarira ngaandibate panhare dzinoti 0782 888 760.
Makadiiko veKwayedza? Ndiri mukadzi ane mwana 1 nemakore 26 ekuberekwa. Ndiri HIV negative uye ndinodawo murume ari pachokwadi chekuda kuvaka imba. Varume vevanhu kwete, ndoda anoda zvekunamata anoshandawo. Ndaneta nematsotsi, ada ngaandibate pa0714 616 530.
Makadii? Ndiri murume ane makore 31, ndinotsvakawo musikana wekuroora ane makore 18 kusvika 26 asina mwana. Ndinobatika pa0771 841 091.
Ndiri mukadzi ane makore 43, HIV+ uye ndinotsvagawo murume anoda zvemba ane makore 45 zvichikwira. Ari pachokwadi anofona pa0787 454 169.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makoe 22 ndodawo musikana ane makore 19 zvichidzika ari wemuHarare chete. lni ndinoshanda, andida ngaandibate pa0783 951 606.
Ndiri murume ane makore 26, ndotsvagawo mukadzi kana musikana wekuroora. Anoda ndibate pa0779 861 886.
Makadiko hama? Ndine makore 22 uye ndinotsvakawo musikana ane makore 20 kusvika 18 ari pamushonga, kunyanya akazvarwa ari pamushonga. Ndogara muHarare, ndoda akanaka asingaratidze kuti anorwara. Ari pachokwadi nhamba dzangu 0714 882 428.
Makadii? Ndiri murume ane makore 30 ndinotsvagawo musikana akanaka ane rudo anotya Mwari mutsvuku kubva pamakore 20 kusvika 23. Ndobatika pa0774 618 832.
Makadii zvenyu veKwayedza? Ndotsvagawo mukadzi ane mwana 1 kana achiri musikana. Ndinoshandira muHarare uye ndiri pachirongwa. Nhamba dzangu 0786 727 373.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 27, ndotsvagawo mukadzi ane makoe 20 – 23 kana ane mwana. Nhamba yangu 0786 984 671.
Kwayedza mweje werudadiso, ndinotenda nebasa renyu rinonwisa mvura. Ndiri murume ane makore 49 uye ndiri pamushonga, ndinotsvagawo mudzimai wekuroora. Nhare yangu 0773 681 909.
Makasimba here veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 28 uye ndotsvagawo mukadzi anoda zvemba. Ngaave aine mwana 1 kana 2. Andifarira ngaasununguke kundibata chero nguva pa0712 496 798.
Kwayedza makadii? Ndiri mukomana ane makore 30, kumusha ndekwaRusape uye ndinoshandira muHarare. Ndotsvaga musikana ane makore 18 kusvika 20 asina chirwere uye asina mwana. Ndobatika pa0714 248 355.
Makadii henyu? Ndiri murume ane makore 33 ndinotsvagawo mukadzi wekuroora uye ndiri pamushonga.Ndine vana 2, anenge andifarira nhare dzangu 0777 021 672.
Makadini veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 32 nevana 2. Ndotsvagawo murume wekudanana naye asina chirwere ane makore 36 – 42. Kana pane andifarira ndobatika pa0778 638 446.
Makadii veKwayedza? Vese vaifona pa0784 648 873 chiregerai, ndakawana. Makaita basa.
Makadii vapepeti vechirongwa? Ndiriwo murume ane makore 40 ekuberekwa uye ndinoshanda muHurumende. Ndine vana vaviri, ndiri kutsvagawo mudzimai anoshanda ari kudawo zvemba. Ngaave ane vana vakewo. Anenge andifarira ngaandibate pa0779 663 195.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 37, ndotsvagawo mukadzi ane makore 25 – 30. Ngaave ane mwana mumwe chete. Andifarira ndibate pa0784 599 316.
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 27, ndinotsvagawo musikana ane makore 20 – 23. Andifarira anofona pa0778 230 141.
TISHAMWARIDZANE31 Jul, 2020
TISHAMWARIDZANE10 Jul, 2020